Hay?addaha gargaarka oo loo gudbinayo qiimayn lagu sameeyey khasaaraha fatahaada webiga shabeelle – Radio Daljir
Diseembar 4, 2013 3:18 b 0
Nairobi, December 4, 2013 – Madax ka socda hay?addaha qaraxa midoobey, ee UNICEF, UNHCR, UNDP iyo UN-OCHA oo uu horkacayey isu-duwaha arrimaha bini?adanimo ee qaramada midoobey Philippe Lazzarini, ayaa qiimayn ku sameeyey fatahaadii webiga shabeelle iyo khasaaraha u gaystay.
Wefdiga booqashada ku tegay Jowhar Salaasadii shalay, waxay sheegeen in ay hay?addaha deeq bixiyaasha u sheegi doonaan wixii ay soo arkeen, isla markaasna kala hadli doonaan sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka u baahan.
Isu-duwe Philippe Lazzarini oo shir jaraa?id ku qabtay Jowhar waxaa uu sheegay inay wax badan ku arkeen Jowhar, isla markaasna kormeereen meelo muhiim ah sida, xaruumaha baragkacayaasha hantidoodii ku waayey fatahaada, beeralayda iyo xaruumaha muhiimka u ah bulshada ee degmada.
Xaalada degmada Jowhar iyo deeganada ku xeeran ayaa ah mid daran, waxaana dhibaato ku haysataa meel ku dhow garoonka diyaaradaha ee degmada jowhar dad badan oo ka soo cararay deegaankoodii kadib fatahaada webiga oo si daran ugu faaftay dhulka.
Beeralayda iyo garab raratada deegaanka ayey sidoo kale saamayn xoog leh ku yeelatay fatahaada webiga shabeelle, maamulka degmada iyo waxgaradka ayaa dhowr jeer cabasho u gudbiyey beesha caalaka iyagoo dalbaday in loo gurmado dadka aan wax haysan ee degmada jooga.